Ingozi yomdlavuza wesibeletho
PHILI MJOLI | September 10, 2019
UMDLAVUZA wesibeletho uhamba phambili kwebulala abesifazane eNingizimu Afrika.
Njengoba namhlanje kuwusuku lokuqwashisa ngezifo eziphatha abesifazane, i-International Gynaecological Awareness Day, isikhungo esicwaninga ngengculazi iClinical HIV Research Unit (CHRU), eNyuvesi iWits nenhlangano engenzi inzuzo iRight to Care bakhethe ukuqwashisa ngomdlavuza wesibeletho.
Imbangela enkulu edala umdlavuza wesibeletho yisifo socansi esingalashwanga, iHuman Papilloma Virus (HPV) esivamile ezifweni eziwu-100 zocansi ezikhona.
UDkt Masangu Mulongo ongumncwaningi eCHRU, uthe umgomo weHPV onikezwa amantombazane ukuwavikela kulesi sifo uyasiza ngoba uvikela amantombazane ukuthi angasitholi.
Umgomo uvikela kakhulu iHPV 16 no18 okuyisifo socansi esivamile.
Eqhuba uthe umgomo usiza ekutheni sehle isibalo sabesifazane abahlaselwa wumdlavuza wesibeletho.
“Abantu besifazane abanegciwane lengculazi kunamathuba aphindaphindwe kahlanu okuthi bahlaselwe yilo mdlavuza ngoba igciwane lenza ukuthi amasosha omzimba abe ntekenteke. Owesifazane ophile kahle kungaphela iminyaka ephakathi kuka-10 no-15 ngaphambi kokuthi umdlavuza uvele. Kowesifazane onamasosha omzimba antekenteke sivela phakathi kweminyaka emibili kuya kwemine,” kuchaza uDkt Mulongo.
UNkk Sibongile Ramotsela, imenenja yophiko olubhekelele umdlavuza wesibeletho kwiRight to Care, uthe ukuze baqwashise abantu besifazane ngalo mdlavuza basungule imitholampilo engumahamba nendlwane ezohambela imiphakathi eyehlukene KwaZulu-Natal, eGauteng naseMpumalanga.
“Senza konke okusemandleni ukuthi sinqande ukuthi abesifazane okutholakale ukuthi banama-cells ashintshile esibelethweni sabo ukuthi akaqhubeki lawo ma-cells abe ngumdlavuza. Emitholampilo yethu iThembalethu esesibhedlela iSt Helen Joseph, eDiepsloot nasesifundeni uThukela, KwaZulu-Natal senza isiqiniseko sokuthi iziguli zethu esezibonakele ukuthi zinama-cellls alo mdlavuza ayanqandwa angaze abe wumdlavuza wesibeletho.”
Abesifazane abavakashela umtholampilo bayahlolwa ukuthi abanawo yini ama-cells angekho esimeni ngokuthi benze i-pap smear.
IZIMPAWU ZALO MDLAVUZA
Ukukhathala, ukungakuthandi ukudla, ukuncipha, ukungazizwa kahle esithweni sangasese kuhlanganisa noketshezi olunukayo oluphumayo kuso, ukuvuvukala konyawo olulodwa.
OBANI ABASENGCUPHENI YOKUHLASELWA YILESI SIFO
Abaqala ukuya ocansini besebancane
Abadla ukudla okungenamsoco, abangazidli izithelo nemifino
Abazalwa emndenini yabantu abanalo mdlavuza
Abanezifo zocansi ezithathelanayo kuhlanganisa negciwane ingculazi.
Ukugoma ngomgono weHPV
Vakashela kodokotela, uhlolwe
Ukungasheshi ukuya ocansini
Ukusebenzisa ikhondomu njalo uma uya ocansini